iOS မှာ Signal ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ
တစ်နည်းပြောရမယ်ဆိုရင် Viber, Messenger, WeChat သုံးတာတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခြားနားချက်က Signal က End to End Encryption ဆိုတဲ့ သတင်းစကား ( Message ) တွေကို ပေးပို့တဲ့သူက လက်ခံသူဆီကို မရောက်ခင် တခြားသူတစ်ယောက်က ကြားဖြတ်ကြည့်ရှုလို့ မရတဲ့ ဝှက်စာပုံစံ (Encryption) ပြောင်းပြီးတော့ ပေးပို့နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Signal မှာ contact တွေ မှတ်မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးဖုန်းနံပါတ်မှတ်တဲ့အတိုင်း ဖုန်း contact မှာ သွားမှတ်လို့ ရပါတယ်။ Signal ကနေတဆင့် ဖုန်းပြောတာ၊ မက်ဆေ့ပို့တာတွေလုပ်ရင် အင်တာနက်လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပို့မယ့်သူရော၊ လက်ခံမယ့်သူကောက အင်တာနက်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်သုံးပြီး ချိတ်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် SMS ဖိုးတွေ၊ MMS ဖိုးတွေ မကုန်တော့ပါဘူး။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နေရာ။။ App ကို Apple App Store မှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်။။ iOS 9.0 နှင့်အထက်။ iPhone ၊ iPad နှင့် iPod touchများနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ယခုလမ်းညွှန် တွင်အသုံးပြုထားသော version။။ Signal iOS 2.23.4
Signal နှင့် ပတ်သတ်၍ အခြားဖတ်စရာများ
အချိန်လိုအပ်ချက်။။ ၁၅-၂၀ မိနစ်
နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ။။ ၂၀၁၈ မေလ ၉ရက်
အိုင်ဖုန်းတွင် Signal – Private Messenger သွင်းခြင်း
အဆင့် ၁။ Signal Private Messenger အား Download ရယူပြီး Install လုပ်ရန်
iOs အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း တွင် App Store က တစ်ဆင့် “Signal” ဟုရှာပါ။ Open Whisper Systems ဖြင့် Signal - Private Messenger app ကို “GET” နှိပ်ပြီး download လုပ်ကာ "INSTALL" ပါ။ Apple ID credentials, အကောင့် အချက်အလက်များ ဖြည့် ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သွင်းပြီးြ့ပီ ဆိုရင် “OPEN” နှိပ်ပြီးဖွင့်လို့ပြီ။
အဆင့် ၂။ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ပြီး အတည်ပြုပါ။
ဒီနေရာရောက်သွားရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပြီး “Activate This Device (ဒီစက်မှာသုံးမယ်)” ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်းနံပါတ်ကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် ဖုန်းထဲကို ဂဏန်း ၆လုံးပါတဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့တစ်စောင် ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီကုဒ်ကို မြန်မြန်လေး ရိုက်ထည့်ေပးၿပီး “Submit” ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
ပြီးရင် Signal ကနေ notification တွေပို့ဖို့အတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ “Allow (ခွင့်ပြုတယ်)” ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၃။ ပရိုဖိုင်နာမည်နဲ့ ကိုယ်စားပြုရုပ်ပုံတစ်ပုံရွေးပါ။
ဒီအဆင့်မှာရွေးလိုက်တဲ့ ရုပ်ပုံနဲ့ အမည်ကို တခြားလူတွေ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ group ထဲ ဝင်ရင် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြားသူတွေက တွေ့နေရမှာပါ။ ဒီအဆင့်မှာ သင့်တော်တဲ့ အချက်အလက်တွေဖြည့်၊ “Save”နှိပ်ပြီး သိမ်းလို့ရသလို၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ထိပ်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ “Skip” ကိုနှိပ်ပြီကျော်သွားလို့ရပါတယ်။
Signal Anchor link ကို အသုံးပြုခြင်း
Signal ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိဆက်သွယ်လိုတဲ့သူတွေမှာ Signal သွင်းပြီးသား ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Signal ကို သုံးပြီး တယောက်ယောက်ကို ဖုန်းခေါ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) မက်ဆေ့ပို့တဲ့အခါ တဖက်လူမှာ Signal app မရှိနေရင် Signal ကနေပြီး သူတို့ဆီကို မက်ဆေ့ပို့ပြီး Signal သုံးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်လားလို့ မေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်တာကိုတော့ Signal app သုံးပြီး ပို့လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Signal က သင့်ရဲ့ contact တွေထဲမှာရှိတဲ့ အခြား Signal အသုံးပြုတဲ့လူစာရင်းကို ပြပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြပေးဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ contact စာရင်းထဲက ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Signal ဆာဗာတွေပေါ်ကို အရင် တင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဒေတာတွေကို တင်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ပြန်ဖျက်ပေးပါတယ်။
မက်ဆေ့တွေကို ဝှက်စာစနစ်နဲ့ ဘယ်လိုပို့မလဲ။
သတိပြုရမှာတစ်ခုက သင့်ဆီမက်ဆေ့ရောက်တိုင်း Alert (သတိပေးစာ)ပို့ပေးဖို့ကို Signal ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Open Whisper Systems က အခြား ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို အသုံးပြုရပါတယ်။ Android အတွက်ဆိုရင် Google၊ iPhone အတွက်ဆိုရင် Apple ကို အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘယ်သူ့ဆီကို၊ ဘယ်ချိန်မှာ ပို့ပေးတယ်ဆိုတာတွေကို အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေက သိသွားနိုင်ပါတယ်။
စပြီး ပို့ဖို့အတွက် screen ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ “Compose” ဆိုတဲ့နေရာလေးကို နှိပ်ပါ။
Signal က သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက Contact အဆက်အသွယ်တွေကို သွင်းယူနိုင်ဖို့ အတွက် ခွင့်ပြုချက် တောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဒါကို လက်ခံနိူင်တယ်ဆိုရင် "OK" ကိုရွေးပါ။ ဒီလိုမျိုး မလုပ်ချင်ရင်လဲ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခြင်းစီ သီးသန့် ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ contact ထဲက Signal အသုံးပြုတဲ့သူတွေရဲ့ စာရင်းကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီမှာ contact တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ contact နဲ့ text-message စာတိုပို့တဲ့ screen မျက်နှာပြင် ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ screen ကနေမှ end-to-end ဟိုဖက်ကောဒီဖက်ကော ဝှက်စာစံနစ် encryption နှင့် စာတို texts၊ ရုပ်ပုံ picture, ဗီဒီယို message တွေကိုပို့လို့ လက်ခံလို့ရပါပြီ။
အခြားသူတွေ ကြားဖြတ်နားထောင်လို့မရအောင် ဝှက်စာစနစ်နဲ့ ဖုန်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ။
အခြားသူတွေကြားဖြတ်နားထောင်လို့မရအောင် ဝှက်စာစနစ်နဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက် Signal ထဲက contact တစ်ခုကိုရွေးပြီး ဖုန်းပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒီအခါမှာ Signal က သင့်ကို မိုက်ခရိုဖုန်းအသုံးပြုခွင့်တောင်းခံပါလိမ့်မယ်။ “OK” ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Signal ကနေစခေါ်လိုက်ပြီးဆိုကတည်းက အဲ့ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို အခြားသူတွေက ကြားဖြတ်နားထောင်လို့ မရတော့အောင် ဝှက်စာစနစ်ပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။
အခြားသူတွေ ကြားဖြတ်နားထောင်လို့ကြည့်ရှုလို့မရအောင် ဝှက်စာစနစ်နဲ့ Video Call ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။
ဝှက်စာစနစ်နဲ့ video call ခေါ်ဖို့အတွက် အပေါ်ကအတိုင်းပဲ ဖုန်းအရင်ခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဗီဒီယိုပုံလေးကို နှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကင်မရာနဲ့ မိုက်ခရိုဖုန်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာမျိုး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးရင် သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ Video call ခေါ်လို့ရပါပြီ။ (သင့်သူငယ်ချင်းလည်း အခုလိုပဲ လုပ်ပေးရမှာပါ။)
အခြားသူတွေ ကြားဖြတ်နားထောင်လို့ကြည့်ရှုလို့မရအောင် ဝှက်စာစနစ်နဲ့ Group Chat ဘယ်လိုစမလဲ။
ဝှက်စာစံနစ်နှင့် Group Chat (အဖွဲ့လိုက် မက်ဆေ့ပို့ စကားပြောခြင်း) လုပ်ဖို့ ဖုန်း screen ရဲ့ ညာဖက်အပေါ်ထောင့်နားလေး က “Compose” ကိုနှိပ်ပါ၊ လေးထော့င်ကွက်လေးထဲ မှာ ခဲတံဘေးပုံနဲ့ဟာလေးပါ။ ပြီးရင် အဲဒီနေရာမှာပဲအသစ်ပေါ်လာတဲ့ လူလေး ၃ ယောက်ပုံ နဲ့နေရာကို ထပ်နှိပ်ပါ။
အောက်ကပြထားတဲ့နေရာရောက်ရင် Group ကို နာမည်ပေးတာ၊ ပြောင်းတာတွေ၊ လူထပ်ထည့်တာတွေ လုပ်လို့ရပါပြီ။ လူတွေထည့်ပြီးသွားရင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က “Create” ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပြီး အဖွဲ့လိုက် Group Chat လုပ်လို့ ရပါပြီ။
အခုဆို group chat ေလးျဖစ္ သြားပါျပီ
နောက်ပိုင်းမှာ အဖွဲ့နာမည်တွေ၊ ကိုယ်စားပြုပုံတွေပြောင်းချင်ရင် (ဒါမှမဟုတ်) လူထပ်ထည့်ချင်ရင် Group Chat လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီး အဖွဲ့နာမည်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် “Edit Group (ပြင်ဆင်မည်)” ကို ရွေးပြီး သွားပြင်လို့ရပါတယ်။
မက်ဆေ့ရောက်ကြောင်း အကြောင်းကြားမှုကို ပိတ်ထားခြင်း
တခါတလေမှာ အဖွဲ့လိုက် အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့ ကိစ္စက စိတ်အနှောက်အယှက်လည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Signal မှာ မက်ဆေ့အသစ်တစ်ခုရောက်တိုင်း ကိုယ့်ကို လာအကြောင်းကြားနေတာမျိုး မမြင်ရအောင် ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် Group Chat လုပ်နေတဲ့နေရာကိုသွားပြီး အဖွဲ့နာမည်ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် “Mute”ကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပိတ်ထားခြင်းတယ်ဆိုတာကို ရွေးလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပိတ်တာကို Group Chat (အဖွဲ့လိုက်စကားပြောတာ)မျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးချင်းစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ Contact တွေကို ဘယ်လို အတည်ပြုမလဲ။
ဒီနေရာမှာတော့ သင်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့လူက သင်တကယ်သိထားတဲ့သူဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲဆိုတာ လေ့လာရမှာပါ။ တဖက်ကလူရဲ့ ဝှက်စာစနစ်သော့တွေဟာ သူ့ရဲ့ သော့ အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်က သူ့ရဲ့ သော့ကို ယူတဲ့အချိန်မှာ အခြားတယောက်ယောက်ရဲ့ သော့နဲ့ အစားထိုးထားတာမျိုး မဟုတ်ကြောင်းကို သေချာအောင် အတည်ပြုတာပါ။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ သင်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့ တဖက်ကလူနဲ့ လူချင်းတွေ့တဲ့အချိန်၊ သူ့ရှေ့မှာပဲ အတည်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင်နဲ့သူစကားပြောနေတဲ့နေရာကို သွားပါ။ ပြီးရင် စခရင်ရဲ့ အပေါ်က တဖက်လူရဲ့ နာမည်ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် “Show Safety Number (လုံခြုံရေးနံပါတ်စဉ်ကိုပြပါ)” ကို နှိပ်ပါ။
ဒီမှာတော့ ‘QR code’ လေးရယ် ‘Safety number’ ဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးနံပါတ်စဉ်လေးရယ် ဖေါ်ပြထား တဲ့ screen ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနံပါတ်စဉ်လေးက သင့် Contact တစ်ခုချင်း အဆက်အသွယ် တစ်ဦး ချင်း နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ conversation တစ်ခုချင်း အတွက်လုပ်ထားပေးတာ ဆိုတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူး။ ဒီ screen နေရာကိုပဲ သင်နဲ့ဆက်သွယ်ချင် တဲ့ လူရဲ့ဖုန်းမှာသွားခိုင်းပါ၊ သူတို့ဆီမှာလည်း QR code လေးပေါ်နေအောင်ပေါ့။
ပြီးရင်တော့ သင့်ဖုန်းကို ပြန်သွားပြီး လေးထောင့်အကွက်လေးတွေပေါ်နေတဲ့ “QR code” နေရာကို နှိပ်ပြီး scan လုပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါမှာ Signal က သင့်ကို ကင်မရာအသုံးပြုခွင့်တောင်းတာမျိုး တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ “OK” ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် တဖက်လူရဲ့ ဖုန်းမှာပေါ်နေတဲ့ လေးထောင့်အကွက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ “QR code” ကို ကင်မရာကနေ scan လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကင်မရာကိုတော့ “QR code” နေရာကို သေချာချိန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကင်မရာကနေ “QR code” ကို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ “Safety Number Matches! (လုံခြုံရေးနံပါတ်စဉ်တွေ ကိုက်ညီပါတယ်)” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးပါတဲ့ အကွက်လေးကို အခုလို မြင်ရပါမယ်။
ဒါအဓိပ္ပာယ် ကအဲဒီဖုန်းနံပတ်နဲ့ သင်နဲ့ အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ. ဒီမှာလုပ်သင့်တာက “Mark as Verified (အတည်ပြုပြီးကြောင်း မှတ်သားမယ်)” ကိုနှိပ်ပြီးတော့ အတည်ပြုပြီးသား ဖြစ်ကြောင်း app က မှတ်မိနေအောင်ပါ။ အဲလိုမှမဟုတ်ပဲ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးလိုပေါ်လာရင်တော့ အဆင့် တဆင့်ဆင့်မှာ တခုခုတော့ မှားသွားပါပြီ။
တဖက်ကလူနဲ့ လုံခြုံရေးနံပါတ်စဉ်တွေ အတည်မပြုရသေးတဲ့အချိန်မှာ အရေးကြီးပြီး သူများသိလို့မရတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးတာမျိုးကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။။ “QR code” ပြတဲ့နေရာရဲ့ ညာဖက်အပေါ်ထောင့်မှာ သင့်ရဲ့ လုံခြုံရေးနံပါတ်စဉ်တွေကို သူများကို ပို့ပေးလို့ရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ခလုတ်လေးတစ်ခုကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူချင်းတွေ့ပြီး သူ့ရှေ့မှာ တခါတည်း အတည်ပြုဖို့ကို ပိုပြီး အားပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်တာ အကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် တခြားလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အပလီကေးရှင်း (application) တွေကနေတဆင့် လုံခြုံရေးနံပါတ်စဉ်ဖိုင်ကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်း လူချင်းတွေ့စရာမလိုတော့ဘဲ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ပျောက်စေ မက်ဆေ့များ ပေးပို့ခြင်း
ပျောက်စေမက်ဆေ့ဆိုတာ မက်ဆေ့ကို လက်ခံသူက ဖတ်ပြီး အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခု အကြာမှာ သူ့အလိုအလျောက် နှစ်ဘက်လုံးမှာ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်ပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် သင်နဲ့ တဖက်လူနဲ့ စကားပြောနေတဲ့နေရာကို သွားပါ။ အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင် တဖက်လူရဲ့ နာမည်ပေါ်နေတဲ့ နေရာကို နှိပ်ပါ။ အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာ “Disappearing Messages (ပျောက်စေမက်ဆေ့)” ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ ညာဘက်ဘေးက ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် သင့်အနေနဲ့ မက်ဆေ့တွေကို တဖက်လူဖတ်ပြီး အချိန်ဘယ်လောက်လောက်အကြာမှာ ပျောက်သွားစေချင်သလဲဆိုတာ ရွေးရမယ့်နေရာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရွေးချယ်မှုလုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးထောင့်က “<” လေးကိုနှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ရင် “disappearing messages” ပျောက်စေမက်ဆေ့ လုပ်ပြီးကြောင်း စာတန်းလေးတွေ့ရမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ရွေးထားတယ်ဆိုတာကို အပေါ်က နာမည်ဘေးနားမှာ အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကျော်ရင် အလိုလိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကို စိတ်ချလက်ချသိထားပြီးတော့ ပျောက်စေမက်ဆေ့တွေ ပို့လို့ရပါပြီ။
Source: Surveillance Self-Defense https://ssd.eff.org/en